सातै प्रदेशमा विश्वविद्यालय - Worldnews.com
सरकारद्वारा गठित विज्ञ समूहले सातै प्रदेशमा राष्ट्रिय विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेपालको सबैभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने चर्को दबाब बढिरहेका बेला सो समूहद्वारा सरकारलाई बुझाइएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आफ्नै विश्वविद्यालयको नामबाट क्याम्पस
यसरी सुधार्न सकिन्छ उच्च शिक्षालाई
ईश्वरराज ढकाल उच्च शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा उच्च शिक्षाको अवस्था र भविष्यमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा सिफारिस...
प्रदेश विश्वविद्यालय खोल्दै गण्डकी प्रदेश सरकार
गण्डकी प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ। प्राडा गणेशमान गुरुङ संयोजकत्वमा विश्वविद्यालय स्थापना अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई आइतबार प्रतिवेदन...
के होला स्ववियु चुनाव ? कलेजहरूमा जताततै ताला
ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं त्रिभुवन विश्वविद्यालय आबद्ध क्याम्पसहरूमा हुन लागेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको मतदाताको सूची प्रकाशित गर्ने तयारी गरिरहेको...
अढाइ सय क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव
ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपत्यकाका ७ र उपत्यका बाहिरका १५ गरी २१ आंगिक क्याम्पसमा मात्रै स्ववियु चुनाव सम्पन्न गरेको छ। बुधबार करिब २ सय ५० सम्बन्धन...
News of Nepal (NewsDB Live) 2017-03-02
चितवन । निजी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन खोज्दा चौतर्फी आलोचना व्यहोरेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पस विस्तार गर्दै अघि बढेको छ । हालसम्म चार ठाउँमा...
तालाबन्दीले थलिँदै सुप विश्वविद्यालय
प्राध्यापक र विद्यार्थीद्वारा ६ वर्षमा २ सय १५ दिन तालाबन्दी हरक सिह धामी प्रदेश नं. ७ को एक मात्र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना २०६७ सालमा भएको हो। यो विश्वविद्यालयको...
News of Nepal 2018-02-26
प्राध्यापक र विद्यार्थीद्वारा ६ वर्षमा २ सय १५ दिन तालाबन्दी हरक सिह धामी प्रदेश नं. ७ को एक मात्र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना २०६७ सालमा भएको हो। यो विश्वविद्यालयको स्थापना भएपश्चात् यो यस क्षेत्रको शैक्षिक विकास हुने ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो। प्रदेश–७ का १५ क्याम्पसलाई आंगिक बनाउन संघीय सरकारले चार वर्षपछि कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृति गरेपछि सुप विश्वविद्यालयले गति लिने...
ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं । सरकारले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको क्याम्पसलाई अन्य विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने? यो कार्य कदापि मान्य हुँदैन। सरकारको यस्तो निरंकुशताविरुद्ध अदालत जाने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो समयमा रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरलाई आधार क्याम्पस मान्दै सूर्यनारायण...
ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था खारेज हुने प्रस्ताव तयार भएको छ। एउटै व्यक्ति सबै विश्वविद्यालयको कुलपति हुँदा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा कठिन पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाउन लागिएको हो। सरकारद्वारा करिब ७ महिनाअघि गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको मस्यौदामा सो विषय उल्लेख गरिएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा परासर...
 स्ववियु निर्वाचन स्थगित हुँदैनः त्रिवि  बाँकेमा क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा आगजनी ईश्वरराज ढकाल काठमाडौं भुवन विश्व विद्यालयले तत्काल कुनै पनि क्याम्पसमा निर्वाचन स्थगित नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। उपत्यकाका महत्त्वपूर्ण २२ आंगिक क्याम्पसमध्ये १४ वटामा तालाबन्दी भएको अवस्थामा त्रिविले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। तीन विद्यार्थी संगठनमध्ये नेपाल विद्यार्थी संघले अधिकांश...
सम्बन्धन दिएको विरोधमा प्राध्यापक–विद्यार्थी आन्दोलित
चितवन । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर चितवनले निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको विरोधमा प्राध्यापक र विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन् । आन्दोलनरत प्राध्यापकले आज विश्वविद्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी निजी क्याम्पसलाई दिएको सम्बन्धन खारेजीको माग गरेका छन् । विद्यार्थीले विरोध प्रदर्शन र धर्ना दिँदै आएकामा अहिले भने प्राध्यापकसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । विश्वविद्यालयका...